[Indlu eyodwa] 《 Indlu enomzali oyedwa 》 Sebenzisa izindlu zombili (kukhona nendlu enabantu ababili)
Buhang-myeon, Gimcheon-si, North Gyeongsang Province, i-South Korea
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jeongwha
U-Jeongwha unokuphawula okungu-100 kwezinye izindawo.
** Lesi sixhumanisi yindlu kamamezala ekwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-5. Kukhona nendlu enomzali oyedwa yabantu ababili, ngakho-ke sicela uhlole iphrofayela yosokhaya. **
《Indlu Yomama Womama》 yindlu yasemaphandleni lapho umnikazi ngokwakhe ayelungisa khona indlu endala eyakhiwe ezintabeni endaweni ephakeme engu-600 futhi ibheke eningizimu.
Ungawuzwa umoya omusha wasemaphandleni owawuzwa kwagogo wakho usemncane ngokusebenzisa amafasitela, izicabha kanye nephansi lendlu endala futhi uyilungise. Iqukethe indawo ethokomele lapho ungathola khona inkomishi yetiye ngenkathi ubuka igceke elikhulu elinombono we-panoramic weMt. Gaya uma uthi nhlá, kanye nestudiyo esingu-1 esinekhishi elincane kanye negumbi lokugezela. Futhi ifakwe ukufudumeza kubhayela.
Amanzi angaphansi komhlaba angaphansi komhlaba anikezwa ihhotela anokunambitheka okuhle kakhulu futhi ahlanzekile, ngakho ungawasebenzisa ngokushesha njengamanzi okuphuza. Ngenxa yokuphakama okuphezulu, umoya nawo muhle kakhulu, ngakho-ke sicela uhambe ugudle umzila wehlathi onikezelwe izivakashi zesifundo semizuzu engama-30.
Njengoba kuyindlu ezimele ezintabeni, ungachitha isikhathi esithile sokuthula uwedwa. Sicela uqaphele ukuthi i-Wi-Fi enesivinini esikhulu nendawo yokupaka yamahhala kuyatholakala.
Le ndlu enomzali oyedwa, ekwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-5, inikeza izitudiyo ezimbili ezincikene. Zombili izitudiyo zineminyango ezimele, amakhishi nezindlu zokugezela, ngakho kuhle ukuthi imindeni emibili ihlale ndawonye.
Umuzi kamamezala yindlu ezimele ezintabeni 600 metres ngaphezu kolwandle.
Ungakwazi ukuzwa ngokugcwele isimo esishintshayo sezinkathi ezine.
Kuyindawo lapho ungakwazi ukuphulukisa ngenkathi ulalele imisindo yomoya, izinyoni nezindawo.
Kukhona iMulsori Ecological Forest esetshenziswa yiGimcheon City cishe imizuzu engama-25 ngezinyawo noma imizuzu emi-5 ngemoto.
Ungakwazi ukujabulela amanzi esigodini esipholile kanye nokuhamba komzila wehlathi.
I-Buhang Dam iqhele ngemizuzu engu-20 ngemoto, ukuze ukwazi ukujabulela izindawo zokuzijabulisa ezihlukahlukene njengewayini le-zip, i-Gureumdari, i-Water Culture Centre, kanye nesifundo sokuhamba ngezinyawo eduze kwedamu.
Kunamathuba amaningi okuzwa imvelo njengoba kunomzila onqamula ehlathini wesifundo semizuzu engama-30 eyenzelwe izivakashi kuphela.
Kungase kube nokushiyeka okuthile ngoba umnikazi wendlu endala emaphandleni wayezinakekela yedwa.
Uma ufuna indawo yakho lapho ungakhululeka khona futhi uzwe umoya wasemaphandleni, ngicabanga ukuthi ayikho indawo engcono kunale.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-100 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
안녕하세요, 3대 째 대를 이어 복분자, 호두 농사를 지으머 시골살이를 하고 있는 농부입니다. 2006년 귀농해서 해발 600m의 조용한 산 속에 집을 짓고 체험농장 및 민박집을 운영하며 지내고 있습니다. 저의 좌우명은 《진인사 대천명》이 랍니다 조용하고 아늑한 저희 《산속의아침》농원의 민박집에서 지친 심신을 달래며 편히 쉬시고 힐링하실 수 있다면 저에게도 큰 보람이 될 것 입니다 환영합니다
Umsingathi uhlala cishe ngamamitha angu-20, ngakho ahlala etholakala ukuze asize nganoma yiziphi izidingo noma ukuphazamiseka.
UJeongwha Ungumbungazi ovelele